အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများမှ Passive income ရရှိနိုင်သလား? – Coursecom
အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများ ဖန်တီးခြင်းသည် Passive income ရရှိရန်အတွက် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများမှ ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော နည်းလမ်း ၂မျိုးရှိပါသည်။
အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုကို တစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ရန်သာလိုအပ်ပြီး အကယ်၍ မိမိ သင်ခန်းစာလွှင့်တင်သော Platform သည် လစဉ်ကြေး ကောက်ယူသည့် စံနစ်ဆိုပါက မိမိသင်ခန်းစာအား လွှင့်တင်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး လစဉ် ဝင်ငွေကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ Platform သည် သင်ခန်းစာကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူမှုဖြင့် ဝန်ဆောင်ခကောက်ယူသည့်စံနစ်ဖြစ်ပါကမူ မိမိသင်ခန်းစာကို စိတ်ဝင်စားဝယ်ယူ လေ့လာသည့် သင်တန်းသားအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကော်မရှင်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် သင်ခန်းစာလွှင့်တင်သည်ဖြစ်စေ ဝင်ငွေတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ လွှင့်တင်သော သင်ခန်းစာ၏ အသုံးဝင်မှု လူကြိုက်များမှုပေါ်မူတည်ပြီး ဝင်ငွေကို ဆက်လက်ရရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာမှ ရသောဝင်ငွေသည် Passive income ဖြစ်နိုင်သလား?
အထက်ပါမေးခွန်းကို ဖြေဆိုရန်အတွက် အောက်ပါမေးခွန်းများနှင့် အဖြေများကို နားလည်ဖြေဆိုနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Passive income ဆိုတာဘာလဲ?
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စကားလုံများဖြင့် Passive income ကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရလျှင် ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီး အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်ပေးနေရန် မလိုအပ်သော အလုပ်မှ ရရှိသောဝင်ငွေ ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် မိမိစိတ်ကူးဖြင့် ဖန်တီးပြီး ကြိုတင်ရေးဆွဲထားသော Website theme တစ်ခုအား ရောင်းချခြင်းမှရသောဝင်ငွေ နှင့် Customer စိတ်ကြိုက် အပ်နှံသော Website တစ်ခုအားရေးဆွဲပေးခြင်းမှ ရသောဝင်ငွေသည် မတူညီနိုင်ပါ။
ပြည့်စုံသည်အထိ ကြိုတင်စိတ်ကူးဖန်တီးထားသော Website theme အားဈေးကွက်တင် ရောင်းချပြီးနောက် သုံးစွဲသူများအတွက် ပြောင်းလဲလာသော နည်းပညာနှင့်ကိုက်ညီအောင် Update များထုတ်ပေးခြင်း လိုအပ်သော Technical support များပေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးရုံဖြင့် Passive income ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
Customer စိတ်ကြိုက်အပ်နှံသည့် Website ကို ရေးဆွဲပေးပါက တစ်ကြိမ်သာ ဝင်ငွေရရှိမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းပြီးဆုံးမှသာ ဝင်ငွေကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေထပ်မံရရှိရန်အတွက်မူ Customer အသစ်အား Website အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပေးမှသာလျှင် ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘလော့များ ဗီဒီယိုဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ စသည်တို့သည် Passive income ရယူနိုင်သော လူကြိုက်များသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ လူစိတ်ဝင်စားနိုင်သော အကြောင်းအရာတစ်ခုအား ဖန်တီးတင်ဆက်ပြီးနောက် အဆိုပါ အကြောင်းအရာအား ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုသူ အပေါ်မူတည်ပြီး ကာလတစ်ခုအထိ ဝင်ငွေများ ဆက်လက်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတွေကနေ Passive income ရရှိနိုင်သလား?
အတိုချုံးဖြေရလျှင် ရနိုင်တယ် ဒါပေမယ့် မရနိုင်ဘူး။ သင့်အပေါ်မှာသာမူတည်ပါတယ်။ နားရှုပ်သွားလားမသိဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်…
အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုကို လွှင့်တင်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့်သွားရမှာပါ။
သင်ခန်းစာကို ခေတ်နဲ့လျော်ညီအောင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးမယ်။
အဲ့ဒီအဆင့်တွေ အတိုင်းသာ စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင် သင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့မလိုအပ်ပဲ အဆိုပါသင်ခန်းစာတစ်ခုတည်းနဲ့တင် Passive income တစ်ခုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာကနေ Passive income ရတယ်လို့ပြောတာလဲ?
သင်ခန်းစာကို တစ်ခါတင်ရုံနဲ့ မပြီးပဲ ဆက်လုပ်နေရတာပဲလို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။
ရှင်းပြပေးပါမယ် အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာကို မလွှင့်တင်ခင်မှာ သင်ခန်းစာကို အချိန်များစွာပေးပြီး စတင်ဖန်တီးရပါတယ်။ လွှင့်တင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ သင်တန်းသားများကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီး ကူညီပေးဖို့သာလိုအပ်ပါတော့တယ်။ ထပ်မံပြီး သင်ခန်းစာကိုအချိန်ပေး ဖန်တီးဖို့မလိုအပ်တော့တာကြောင့် အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာကနေ Passive income ရရှိတယ်လို့ ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုကနေ Passive income မရနိုင်တော့ဘူးလဲ?
အကယ်၍ မိတ်ဆွေဟာ သင်တန်းသားတွေကို အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီး ကူညီပေးတာမဟုတ်တော့ပဲ နေ့စဉ် တာဝန်တစ်ရပ်လို ဖြေကြားကူညီပေးနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို Passive income ရတယ်လို့မဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးကူညီပေးခြင်းကို သင်ခန်းစာက ရတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းအတွက် ကူညီတာမဟုတ်တော့ပဲ Premium Feature အဖြစ် နောက်ထပ်ကျသင့်ငွေကောက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာကနေ Passive income တစ်ခု ရနိုင်သလားဆိုတာ သင့်အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ အခကြေးငွေမယူပဲကူညီပေးပါက ပညာရပ်ဆိုင်ရာစကားလုံးများအရ သင်ခန်းစာကနေ Passive income ရတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာကနေ Passive income တစ်ခုရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရနိုင်ပါဘူး။ သင်ပါးနပ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ် မိတ်ဆွေ။
Credit By Kaung Hein Soe
0 responses on "အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများမှ Passive income ရရှိနိုင်သလား?"
Aung Myo Myint on Change Management – Question 6